Whitesboro, Oklahoma, i-United States
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Ron And Sandra
Le khabethe elihle elakhiwe ngo-2021 litholakala ehlathini likaphayini nokhuni oluqinile kumahektha ayi-140. Ikhabhinethi inombhede ongusayizi wenkosi nosofa olala usayizi wendlovukazi. Inobhavu wokucwilisa amanzi kanokusho onokubuka phezulu kwesihlahla kanye neshawa. Inekhishi eligcwele elinazo zonke izinto ezibalulekile zokupheka, i-grill yangaphandle kanye nomgodi womlilo one-grill. Izinkuni zihlinzekwa. Isitezi esikhulu esingaphansi siyindawo yokuhlala yangaphandle enobhavu oshisayo, izihlalo ze-hammock nombhede oshwibayo. Le ndawo ijoyina i-Ouachita National Forest.
Leli yikhabethe le-treehouse eliyingqayizivele elinendawo yokuhlala enhle ngaphandle emphemeni ongaphansi kwe-treehouse. Idekhi inezihlalo ezilengayo ze-hammock, umbhede oshwibayo kanye nobhavu oshisayo futhi ngaphandle kwedekhi kukhona umgodi womlilo. Uzungezwe ihlathi elihle. Isimo sokuphumula kakhulu.
Ungase futhi uphumule kalula esikhaleni sethu wazi ukuthi omatilasi nemicamelo yakho kuyisivikelo se-encasement. Lokhu kukuvikela ezinambuzaneni eziwuthuli, izimbungulu, izinto ezingezwani nomzimba kanye noketshezi.
Izingubo zokulala zosofa zitholakala ngaphansi kombhede wenkosi emakhabetheni.
Siphinde silandele iziqondiso zokuhlanza ze-Airbnb. Ukuhlanza indlu kugqoka imaskhi namagilavu ngenkathi kuhlanzwa ikhabethe futhi imikhiqizo yokuhlanza esetshenziswayo ituswa i-Airbnb ukuze kubhekwane nezinkinga zegciwane namagciwane.
Sithemba ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi, kuhlanzeke futhi kuhlanzeke ngangokunokwenzeka.
Ingxenye yokuhlala kwakho izonikelwa ku-OpenHomes. Le nhlangano ihlinzeka ngezindlu kulabo abadinga usizo ngezikhathi zobunzima, izingxabano, nezimo zezokwelapha. Ngiyabonga.
5.0(51 okushiwo abanye)
Ikhabethe lisehlathini likaphayini nokhuni oluqinile lihlezi kumahektha ayi-140. Kungaba amamayela ayi-12 ukuya edolobheni elincane laseTalihina futhi cishe. Amamayela angu-45 ukuya edolobheni elikhulu elilandelayo laseMena, AR. Cishe ihora ukuya eBroken Bow naseHochatown usuka endlini. Umsebenzi we-Great Lake lapha.
Kunamanye amachibi amaningana phakathi nesikhathi sokushayela ihora. Lezi zihlanganisa i-Wister Lake, i-Sardis Lake, ne-Cedar Lake.
Kuhle kulabo abathanda amachibi nokudoba.
Ibungazwe ngu-Ron And Sandra
Ungaxhumana nathi ngombhalo noma ngocingo uma udinga ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Sinendlu yangasese eseduze futhi sisemagcekeni njalo.
Sicela usithinte nganoma yini ongase uyidinge noma unemibuzo nje ngayo.
URon And Sandra Ungumbungazi ovelele